नारायणी किनारतर्फ गइरहेको प्रत्यक्ष्य देख्नेले दिए यस्तो जानकारी, सिसिटिभी फुटेजमा के देखियो ? | समाचार
July 16, 2021 NepstokLeaveaComment on नारायणी किनारतर्फ गइरहेको प्रत्यक्ष्य देख्नेले दिए यस्तो जानकारी, सिसिटिभी फुटेजमा के देखियो ?
काठमाडौ । गत असार १४ गते भरतपुरबाट हराएकी विना सापकोटा अझै फेला परेकी छैनन् । भरतपुर र आसपासमा राखिएका सरकारी सीसीटीभी क्यामेराले काम नै नगरेका कारण उनको खोजी गर्न प्रहरीलाई पनि समस्या भएको छ । उनलाई केही दिन अघि भाटभटिनी अगाडी सडकमा एक्लै हिँडेको भिडियो बाहिरिएको थियो ।